Puntland iyo Somaliland oo Codsaday inay ku biiraan Ethiopia" – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO Puntland iyo Somaliland oo Codsaday inay ku biiraan Ethiopia”
Waa dabayaaqadii bisha April, 2015. Waxaa saaka fasalka soo galay Dr. Negari Lencho oo ah Hormuud ku xigeenka Kuliyadda Saxaafadda ee Jaamacadda Addis Ababa University. Isagu waa Oromo. Waxa uu taageere u yahay xisbiga EPRDF ee Itoobiya xukuma. Waa murashax xildhibaannimo ee doorashooyinka dhawaan dhici doona.
Dr. Negari, waxa uu hadalkii ku bilaabay ‘maanta maqaalkan ayaynu falanqayn doontaa’. Maqaalka waxaa lagu daabacay Wakaaladda Warar ee Itoobiya (ENA). Waa Wakaaladda rasmiga ah ee dalka. Maqaalka waxa cinwaan looga dhigay ‘Maamulada Puntland iyo Somaliland oo soo codsaday in ay ku soo biiraan dalka Itoobiya!’
Dr. Negari Lencho hadalkiisi ayuu sii watay. Maqaalka oo Af Ingiriisi iyo Af Xabashi labadaba ku qoran ayuu in cabbaar ah sharaxay. Ka dibna waxa uu na waydiiyey sidee u aragtaan in maamulada Puntland iyo Somaliland ay ku soo biiraan dalka Itoobiya?
Ardaydiibaa dood bilaabay. ‘aniga waxay ila tahay argagixiso ayay leeyihiine ha inaga maqnaadaan!’. Mid Dhabuub ah ayaa sidaa ku dooday. ‘Maya. Maya. Waa in yar oo waynu ka adkaan karnaaye, dekado muhiim ah ayay leeyihiin, inaguna dekado ma lihine, ha loo ogolaado in ay inagu soo biiraan. Arintaas ha la dedejiyo’. Mid Xabashi ah ayaa sidaa ku nuuxnuuxsaday.
Anigu waan daawanayaa. Fasalka kaligay ayaa wax Soomaali ah dhigta. Aniga oo iska aamusan. Ayuu mid I ag fadhiyay oo Oromo ahi igu yidhi. Maxay kula tahay? Waxaan ugu jawaabay ‘waxani waa iska riyo ee run maaha. Mid kale oo gees kale fadhiyay ayaa hadal igula soo booday. Wuxuu si faanfaan ah u yidhi ‘Nageye, it’s already done – waar Nageeyoow, warkani mar hore ayuu dhammaadaye adigaa hurda!’
Yaabkaas ayuu saaka fasalki ku dhammaaday. Waxaan isku dayay inaan arintan ujeedada laga leeyahay ka salgaadho. Dr. Negari Lencho ayaan cabbaar ka dib raadiyay. Xafiiskiisa ayaan ugu tagay. Waxaan ku idhi ‘fadlan qoraalkan ujeedadiisa ma I fahamsiin kartaa’? Wuu igu qoslay. Kaftan iyo jeesjees badan ka dib waxa uu yidhi ‘markii idinku dawladnimada aad qaadateen 1960kii, iyada oo Hargeysa ay biyo la’aan tahay, saw dadkiina kumay daan odhan jirin Herer iyo Hawaash ayaynu xoraynaynaa? Sababtu waxay ahayd si culayska gudaha aad u yaraysaan waa in dadka himilo fog loo abuuraa. Tanina waa tii oo kale. Si aanu u midayno qoomiyadahan badan ee Itoobiya ee qaarkood goosashada rabaan. Waa inaanu abuurnaa khayaal bulshada laga dhaadhiciyo oo sheegaya in ummadihii jaarkayaga ahaaba ay rabaan in ay anaga nagu soo biiraan oo ay nala midoobaan. Markaa waa in wadajirkeena iyo dawladnimadeedna aynu ilaashanaa. Ujeedadu waa intaas. Hadana xilli doorasho ayaa lagu jiraa oo midaynta shucuubta Itoobiya waa muhiim. Maqaalkana waxaa qoray mid ka mid ah Kaadiriyiinta Xisbiga. Mahadsanid!’
Dr. Negari Lencho, markii dambe waxa uu noqday Wasiirka Warfaafinta ee Itoobiya. Maalintii Cabdikariin Muuse (Qalbidhagax) dawladda Soomaaliya ay sida sharcidarada ah ugu dhiibay Tigraygii Itoobiya xukumayay, Dr. Negari Lencho waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyey ee warbaahinta ka hadlay ee yidhi waxa na loo soo dhiibay qof argagixiso ah oo danaha Itoobiya halis ku ah. Hadana inkasta oo aanan hubin, maamulka Oromia ayuu xil fiican ka hayaa.
Warkan oo dhan waxaan uga jeedaa, sheekada khayaalka ah ee ‘Isdhexgalka Geeska Afrika’ nin Abiy Ahmed la yidhaahdo ayaa dadkiisa kala daadsan raba in uu ku mideeyo. Maalinta uu dantiisa gaadhana, isdhexgal maahee waa is muquunin iyo isu xoog sheegasho.!
Inaguna safarada iyo sawirada ayaynu ilaa hadda qaabilsanahay.
Wacaa Qoray Nageeye Cali khaliif.